Dowladda Jabuuti oo war rasmi ah kasoo saartay arrinta Fahad iyo diyaaradii baaqatay | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Warkii Dowladda Jabuuti oo war rasmi ah kasoo saartay arrinta Fahad iyo diyaaradii...
Dowladda Jabuuti oo war rasmi ah kasoo saartay arrinta Fahad iyo diyaaradii baaqatay
Muqdisho (Warkii.com) – Dowladda Jabuuti ayaa war rasmi ah kasoo saartay wixii maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha Jabuuti, xilli ay dowladda Soomaaliya sheegtay inay xanibtay la-taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin.
Wasiirka Arrimaha Dibedda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in sababta aysan maanta Jabuuti uga soo bixin diyaaradda Turkish Airlines ay tahay cilad farsamo, sida ay sheegtay, buu yiri shirkadda Turkish Airlines.
“Mid ka mid ah duuliyayaasha wuxuu haystay fasax gaar oo ah inay soo caga dhigan karto Muqdisho,” ayuu yiri Wasiirka, oo tixaraacaya wararka sheegaya in hay’adaha amniga Soomaaliya ay diideen in diyaarad sidda Fahad aysan iman karin Muqdisho.
“Dhammaan rakaabka saaran duulimaadkii Turkish Airlines ee Muqdisho waxay ku laaban doonaan Istanbul, si ay usoo raacaan duulimaad kale oo ku wajahan Muqdisho,” ayuu yiri Maxamuud Cali Yuusuf. Dadka duulimaadka saaran ayaa gaaray 40 qof, waxaana ka mid ah Fahad Yaasiin.
Wasiirka ayaa sheegaya in wararka kale ee arrintan la xiriira ay yihiin kuwa been abuur ah oo lagu sameynayo jahwareer, islamarkaana Jabuuti lugaha loogu gelinayo xasaradda iyo khilaafka gudaha Soomaaliya.
“Waxaan garab taagnaan doonaan walaalaheen Soomaaliya, hase yeeshee marnaba ma faro-gelin doonni arrimahooda gudaha,” ayuu yiri Maxamuud Cali Yuusuf.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa horey ugu eedeysay Jabuuti inay xannibtay Fahad Yaasiin.
Dhinaca kale, ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in hay’adaha amniga Soomaaliya ay ku amreen diyaaradaha caalamiga ah inaysan Muqdisho keeni karin agaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji.
Previous articleHay’adaha Amniga DF oo amray diyaaradaha inaysan Fahad keeni karin Muqdisho
Next articlePep Guardiola oo diiday inuu raaligelin siiyo taageerayaasha Man City kadib Hadalkiisa dhawaan